Örebro - Krisinformation.se
Iska ilaali joogitaanka bay'adaha gudaha sida dukaamada, xarumaha ganacsiga, matxafyada, maktabadaha, goobaha dabaasha iyo jiimka. Booqashooyinka daruuriga ah ee tusaale ahaan lagu tagaayo dukaamada raashinka iyo farmashiiyaha ayaa la sameyn karaa.
Iska ilaali inaad ka qeybqaadato, tusaale ahaan shirarka, riwaayadaha, bandhigyada, tabobarada, kulamada iyo tartamada isboortiga. Laakiin taasi ma khuseyso tabobarada isboortiga ee carruurta iyo dhalinyarada dhalatay 2005 ama wixii ka danbeeyey.
Go'aanka waxa sidoo kale ku jira talo bixinta guud ee laga sii adkeeyay ee la xiriirata waxqabadyada- sida dukaamada, xarumaha ganacsiga iyo goobaha isboortiga - iyo goobaha shaqada ee gobollada:
Dhamaan waxqabadyada gobolka ama waax/qeyb gobolka ah waa inay qaadaan talaabooyin uu qof kastaa ugu raaci karo talooyinka guud ee marka meel degaanka uu ka dillaac covid-19. Taasi waxay tusaale ahaan noqon kartaa in goobta waxqabadku ay dhinto/yareyso tirada soo booqdayaasha ee wakhti isku mid ah wada jooga, saacadaha furitaanka oo lagu beego oo waxqabadku uu bixiyo fursad dhijitaal ahaan wax lagu qabsan karo.
Loo shaqeeyayaashu waa inay qaadaan talaabooyin inay shaqaaluhu ay raaci karaan talooyinka guud ee marka meel degaanka uu ka dillaac covid-19. Waxay kuwaasi noqon karaan talaabooyin sida ku dhiirrigelinta shaqaalaha inay guriga ka soo shaqeeyaan, iyadoo ls siiya fursado dheeri ah oo ay guriga kaga soo shaqeynayaan iyo in safarada shaqadu dadka dirto, shirarka iyo kulammada kale ee jir aheed dib loo dhigo.
Xadidaadaha gaarka ah
Xadka ugu badan ee 50 qof ee kulamada dadweynaha iyo munaasabadaha dadweynaha ayaa gobolka ka sii shaqeynaaya ilaa iyo amar dambe.
Publicerades 6 nov 2020 14:41